Ciidda diinta masiixiga ee Påsk oo berito bilaaban doonta - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Boojaanta, ukunta, baalasha digaagga iyo midabka jaalaha oo lagu yaqan ciidda Påsk. sawir: Anders Wiklund/TT
Ciidda diinta masiixiga ee Påsk oo berito bilaaban doonta
Gabay: Ukun, ukun. Cun Ukun. Si uu gar kuugu soo baxo
La daabacay torsdag 13 april 2017 kl 14.40
Laga bilaabo maalinta Jimcada ee Berito ku beegan waxaa dalkan Iswiidhen looga dabaal-degi doonaa ciidda Påsk ama ciidul Fusxa waxa carrabiga lagu yiraahdo.
40 maalmood hortood inta aan la gaarin ciidda Påsk, ayaa ah maalinta mactabka la surey Nebi Ciise, islamarkaana uu beryo kadib dib u soo nooladey loona safriyey samada sida diinta islaamkuba qabto.
Ereyga Påsk ayaa ka soo jeeda luuqadda Hibreega eyna ku hadlaan qowmiyadda Yuhuuddu. "Pesach", ayay ugu yeeraan macnihiisuna yahey "dhaafid ama gudbid".
Ciidda Påsk afkan iswiidhishka lagu yiraahdo ayaa ka mid ah ciidaha ugu waaweyn ee waddammada haysta diinta masiixiga. Inkasta oo ciiddani tahey mid ka soo jeeda reer bani’israa’iil waxaa sidoo kale looga dabaal-degaa dalkan Sweden.
”Rajada” ayaa ah midda loo xafladeeyo. Dhimashadii iyo dib u soo nooleyntii Nebi Ciise.
Maalinta Påsk-iga, ayaa leh muhiimadda ugu ballaaran ee xafladda. Waana maalintii Nebi Ciise dib ruuxa loogu soo celiyey ee loo dhoofiyey samada.
Xilliga ciiddan waxaa astaan u ah in noloshu dib u soo bilaabato. Dabeecaddaba ha ahaatee. Waxaa laga baxey xilligii Jiilaalka ee qaboobaha, dhirtii oo cagaaratey, afar maalmood oo dadku fasax yihiin ciidda daraadeed. Waxaa kulma qaraabada. Waxaa loo baxaa dibadaha. Cunno macaan ayaa la cunaa iyo wixii la mid ah.
Ciiddan ayey bulshada iswiidhishku siyaabo kala duwan ugu xafladeeyaan. In kuwa aaminsan diinta masiixiga ey maalinda Påsk-iga ey kaniisadaha taagan oo ku soo alle bariistaan saacadda kow iyo tobanka kolka ey tahey. Intii aan middaa sameyna ey qaraabadu kulanto, wada xafladeyso oo cunnaanna cunno macaan.
Långfredagen, waa maalinta dhibaatada, hase yeeshee sabtida ayaa ah maalinta rajada ee xafladda dhabta ahi dhacdo. Sidoo kale waxaa dalkan looga xafladeeyaa siyaabo kala duwan oo isugu jira qaab diiniyan ah, waa ciddii aaminsan iyo caadooyin ka soo jeeda dhaqanka.
Maxaa ka mid ah caadooyinkaa dhaqanka ka soo jeedaa?
Albaabka oo ey hablo yar yari kugu soo garaacaan iyaga oo u labisan sidii islaamo gaboobey, hase yeeshee shuruud ey u tahey in nacnac la siiyo iyo macmacaan. Sidoo kale waxaa maalinta ciidda si aad ah loo cunaa ukunta.